Singapore - Xalka OMG - Caawinta Kahortagga Qulqulka Duugista & Qulqulka | Xalka OMG
OMG Solutions - Waxaan bixinaa xalal teknolojiyad balaaran oo kaladuwan sida ka hortagga dhicitaanka, qalabka digniinta gurmadka degdega ah, baadi goobada GPS iyo kamaradaha amniga. Wuxuu daryeelaa daryeel bixiyayaasha fududeynta culeyskooda jireed iyo shucuur ahaan taasoo ka dhalatay baahida loo qabo in la daryeelo naafada ama waayeelka.
Nidaamka Ammaanka Aqalka Sare ee VCare Smart WiFi / 3G
vCare waa nidaam digniin nabadgelyo oo loogu talagalay dadka waayeelka ah, guriga. Nidaamku wuxuu bixiyaa adeegyo isku dhafan, oo ay ku jiraan amniga guriga, qaab nololeed caafimaad leh iyo daryeelka waayeelka. Waxay adeegsaneysaa isku-xirka laba-geesoodka ah (WiFi iyo GSM / 3G ama 4G) si ay ugu gudbiyaan macluumaadka si ay kiciyaan qaylo-dhaanta - hab fudud, badbaado leh oo dhakhso leh.
Haddii aad xafiiska joogtid ama aad safar safar shaqo dibadda ah ku joogto, vCare ayaa kula jirta. Waxaad si fudud u ogaan kartaa heerka nidaamkaaga qalabka digniinta smart, kormeerka gurigaaga iyo daryeelidda waalidiintaada. Xitaa waa suurta gal in la hubiyo huurka iyo heerarka heerkulka guriga (gudaha iyo banaanka). Marka la adeegsado vCare, waxaa laguugu xaqiijin karaa amnigaaga iyo amnigaaga.
Waxay ka hortagtaa daba-galka & si sahlan ula socodka waayeelka
Kormeerayaasha Ka Hortagga Maqalka Kabaha
Ka-hortagidda Ka-hortagidda Maqnaanshaha waa sahlan tahay in la isticmaalo: Isku-duwo miisaanka sariirta ee sariirta, kursiga suuliga, ama sagxadda dhulka si uu u kormeero ka-hortagga dhicitaanka. Ka dibna cadaadiska culeyska culeyska saaro sariir ama kursi, ka yar qof degane ah oo halis ugu jira inuu dhaco ama is-wareejiyo. Miisaanka dareenka sare ee miiska waxaa lagu dhejiyaa sariirta ama albaabka. Marka qof degan uu isku dayo inuu koro, cadaadiska waxaa laga saaraa sariirta ama kursiga kursiga ama wuxuu ku daboolanayaa sariirta sagxadda, kaas oo ogeysiiya daryeel bixiye by digniin la maqli karo, boorka aamusnaanta, qaylo-dhaanta koranto, iftiin degdeg ah, ama kormeer dhexe caawimaan marka loo baahdo.
Dementia / Dadka waayeelka ah / Carruurta GPS Tracker & Fall Detator
40650 Wadarta Views 2 Views Maanta